EMMA ELISE KAMGANG, Mpanoratra ao amin'ny TELES RELAY
Raharaha Ernest Obama: "Amougou Belinga dia tsy maintsy masiaka sy tsara toetra", mieritreritra…
EMMA ELISE KAMGANG Jona 23, 2020 0
Mino izy fa amin'ny fomba toy izany ihany no hiarovan'ny mpandraharaha ny orinasany amin'ny fikasana maloto. Mihabetsaka ny fanehoan-kevitra momba ny fanontanian'ny…
Te hianatra ny fomba hampiavaka ny vehivavy am-pandriana ianao? eto ary aiza ary ahoana no hampifantohanao ny sainao raha mbola tia fitiavana ianao, hanalanao ny vadinao any amin'ny lanitra fahafito sy mihoatra. sary crédit 1…
Paris La Défense Arena: “Reprogram Céline Dion na Iron Maiden, kilalao skittles izany…
INTERVIEW "Izahay no voatahiry voalohany ary izahay no farany nanokatra indray", hoy i Batilde Lorenzetti, filoha lefitry ny Paris La Défense Arena. Nanomboka ny 7 martsa, tsy nisy hetsika na iray aza tao amin'ny efitrano Hauts-de-Seine…
Ny fanesorana an'i Ernest Obama amin'ny fiantsoana ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fantsona fahitalavitra manokana dia ny Vision 4, dia mitohy ny fitrandrahana izao tontolo izao. Tsy nisy na iza na iza nanamarina an'io haingo tsy mahazatra tamin'ny 18 jona io tany amin'ny foibe ...
Amougou Belinga dia nandà ny famelana an'i Ernest Obama
EMMA ELISE KAMGANG Jona 22, 2020 0
Vaovao momba ny Kameroney avy amin'ny zoro d Ny Tale Jeneralin'ny vondrona L'Anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga dia mikasa ny hanohy ny hetsika ara-dalàna, izay natombony tamin'ny alàlan'ny ...
Kamerona - Raharaha Ernest Obama: Ny "Fandresena 4 dinosaurs" "nanomboana an'i Ernest ...
Tamin'ity alatsinainy 22 jona 2020 ity, tamin'ny andiam-pampivaran'ity programa ity dia nohanina ny maherin'ny Tale Jeneralin'ny fahitana teo aloha. Mitohy eny an-habakabaka ny fanapoahana ny tale jeneraly an'ny Talen'ny Fahitana4, Ernest Obama…
Trump dia manao sonia ny didim-panjakana fanaon'ny polisy
EMMA ELISE KAMGANG Jona 17, 2020 0
Taorian'ny fihetsiketsehana ara-tantara taorian'ny nahafatesan'i George Floyd Afrikana-Amerikana dia nanao sonia didy i Donald Trump tamin'ny talata mba hiatrehana ny herisetra ataon'ny polisy. Demokraty sy mpikatroka mangataka…
Coronavirus: Hitan'i Shina ny tranga vaovao amin'ny Covid-19 ao amin'ny faritr'i Beijing
Shina, izay niseho voalohany tany Covid-19 tamin'ny faramparan'ny taona 2019, dia nahita fiverenan'ny tsy fahita firy tato anatin'ny andro vitsivitsy izay, afovoany amin'ny tsenan'i Xinfadi goavambe any atsimon'ny renivohitra. Tranga vaovao miisa zato no…
Fizahantany: Fanentanana hamelomana indray ny sehatry ny krizy any amin'ny faritra
Hanohanana ireo mpandray anjara ara-pizahan-tany, malemy hatramin'ny nanombohan'ny krizy ara-pahasalamana, dia nanatontosa ny Faritra ny alatsinainy 15 jona 2020, ny fampielezan-kevitry ny serasera vaovao hampiroboroboana ny faritany. Mila mamonjy a…
Ilay mpilalao sarimihetsika atao hoe Vanessa Paradis, izay nosoloany ny Underskirt ny tovovavy?
EMMA ELISE KAMGANG Jona 15, 2020 0
Nandefa ny tantara an-tsary «Sous Les Jupes des Filles» i W9 io takariva io tamin'ny 21:05 alina niaraka tamin'i Vanessa Paradis, izay nisolo mpilalao sarimihetsika iray hafa tsy ela akory. Ilay mpilalao sarimihetsika hita any amin'ny toerana akaiky sy tonga soa, Audrey Dana mandeha ao ambadiky ny fakantsary tamin'ny taona 2014…